CAD for Myanmar: S-03: WinRAR 4.0 32bit & 64bit Installer Download
CAD for Myanmar
မင်္ဂလာပါခင်ဗျား . . . ကျနော် AutoCAD နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုလေးတွေ လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာက ဖြစ်နိုင်ရင် CAD Software တွေ တော်တော်များများအကြောင်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတလေးတွေ၊ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှစေချင်တာပါ။ ကျနော့်မှာ ရှိတာကတော့ AutoCAD အတွေ့အကြုံတွေပါ။ မိတ်ဆွေတို့ သိချင်တာ၊ မေးချင်တာလေးတွေရှိရင် ကျနော်သိတာ၊ တတ်တာလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြန်တာ နောက်ကျရင်တော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီး၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ AutoCAD နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအပေါင်းအတွက် ကျနော်တတ်နိုင်တာလေးကို ဖြည့်ဆည်း ပေးချင်တာပါ။ နောင်ကိုလဲ AutoCAD နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးတွေ၊ ဆောင်းပါးလေးတွေ၊ AutoCAD eBooks တွေ၊ Engineering eBooks တွေ ကို တတ်နိုင်သလောက် တင်ပေးသွားပါ့မယ် . . .
S-03: WinRAR 4.0 32bit & 64bit Installer Download
AutoCAD 2012 ကိုတင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ eMails တွေ တော်တော်လေး ၀င်လာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဆိုတာထက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေးတာက ပိုများနေပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် WinRAR 4.0 32 bit & 64 bit ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Download ချပြီး Install လုပ်ကတည်းက ISO Extension ကိုပါ Select လုပ်ထားပါ။ Install လုပ်ပြီးရင် rarreg.key နဲ့ထပ်ဖြည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ ၀ယ်ထားသလို ခပ်တည်တည် သုံးနိုင်ပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို ReadMe.txt မှာလေ့လာကြည့်ပါ။
Download ချပြီးသား AutoCAD Files တွေကို WinRAR နဲ့ဖြည်လိုက်ရင် ISO Extension နဲ့ File တခုရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ISO File ကို DVD ပေါ် Burn ပြီး Install လုပ်ချင်လုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ ISO File ကို WinRAR နဲ့ ထပ်ဖြည်လိုက်ပြီး Install လုပ်လဲ ရပါတယ်။ ပြီးရင် Crack အောက်က Install.txt ကိုဖတ်ပြီး Crack လုပ်လိုက်ရင် ဟန်ကျပန်ကျ သုံးနိုင်ပါပြီ။
ကဲ . . . ကွန်ချက်လည်း ပြပြီးပါပြီ။
ချက်ပြီးသား ဟင်းတခွက်လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက်၊ လက်ထဲအရောက် လာပေးပြီးပါပြီ။
ဟင်းစပ်မကောင်းလို့ နားရင်း “ထ”မရိုက်ပဲနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ခွင့်ပေးပါနော် . . . ။
“အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ” ခင်ဗျား . . . ။
Posted by Wise Guy at 12:40 AM
ဒီနေ့ဟာ မြန်မာလိုဆိုရင် . . .
ရွှေနိုင်ငံမှာ . . .
စီကာစဉ်ကာပူမှာ . . .
တင်ပြီးသမျှ . . .
S-02: AutoCAD 2012-64 Bit Installer Download
S-01: AutoCAD 2012-32 Bit Installer Download
လာလည်သွားတာ . . .
ကဲ . . . ပြော . . .
မိတ်ဆွေများကတော့ . . .
M&E အတွေ့အကြုံတွေ M&E Engineering for Building Services